Sarkaal Katirsanaa Hay’adda Islamic Relief oo Baydhabo Lagu Dilay
May 10, 2012 - jawaab	Number of View: 220Share
Baydhabo:- Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa soo sheegaaya in kooxo hubaysan oo aan haybtooda la garanayn ay habeenimadii xalay ku dileen magaalada Baydhabo sarkaal horay ula shaqayn jiray hay’ada Islamic Relief.
Ninka la dilay ayaa waxaa lagu magcaabi jiray Maxamed Axmed Fanax waxaana la sheegay in uu hay’adda Islamic Relief isku duwe uga ahaan jiray Baydhabo ka hor inta uusan iska joojin shaqada hay’addaasi.
Lama oga cidda dishay iyo sababta loo dilay mana jirto cid loo qabtay dilka sarkaalkaasi horay ula shaqayn jiray hay’adda Islamic Relief.
Ciidamo Dawladda katirsan ayaa hawlgallo ka sameeyey goobta dilku ka dhacay mana jirin cid ay usoo qabteen dilka Maxamed Axmed Fanax.
Guddoomiyaha gobolka Bay ee maamulka Dawladda KMG ah C/fataax Xassan Geesay oo aan la xiriirnay ayaa sheegay in ay baaritaan ku wadaan qaabkii loo dilay Maxamed Axmed Fanax iyo cidda dilka ka dambaysay.
Magaalada Baydhabo oo ay iminka maamulaan Ciidamada Dawladda KMG ah ayaa waxaa kusoo badanaayey muddooyinkan dilalka qorshaysan iyo qaraxyada khasaaraha geysta.